Ifulethi eliphakathi nendawo elilodwa lokulala
Ifulethi elihle lokulala elilodwa elingemuva kwesakhiwo lihle kakhulu futhi lithule. Phansi phansi ukuze kungabikho izitebhisi ezikhuphukayo. Indawo yokuphumula inosofa, indawo yokupheka neyokudlela, i-TV nokukhanyisa okukhululekile. Umbhede ophindwe kabili egumbini lokulala elinendawo yokulenga nekhabethe. Igumbi lokugeza lineshawa phezu kokugeza. Kunikezwe zonke izingubo zokulala namathawula. Ifulethi lihle futhi linethezekile ngokushisisa okumaphakathi namanzi ashisayo asheshayo. Ukupaka kusemgwaqweni. Indawo ephelele yezivakashi nabasebenzi. Ilungele kakhulu isikhungo sedolobha kanye ne-ARI.
Ifulethi lithokomele futhi lithulile njengoba lingemuva kwesakhiwo. Uzothola konke okudingayo ukuze uhlale isikhashana okuhlanganisa okokulala namathawula. Futhi i-shampoo, i-conditioner nokugeza umzimba. Ikhishi lihlome kahle futhi linamafutha okupheka, usawoti kanye nopelepele, itiye, ikhofi noshukela. Kukhona nendawo yokudlela ngakho-ke sicela ulethe ikhofi lakho olithandayo!
Ifulethi liwuhambo olufushane lokungena eCity Center futhi liseduze ne-ARI, i-Aberdeen University kanye neNescol. I-Westburn Park iseduze futhi ulwandle lungaphakathi kwebanga lokuhamba. I-Old Aberdeen iwuhambo oluhle futhi. Kukhona Izitolo ezinkulu eziseduze zokudla kanye nesitolo esiseduze esivulwa amahora angama-24 ngezinto ezibalulekile.
Ngihlala kude ukuze ngikwazi ukuphendula noma yimiphi imibuzo izivakashi zami ezingaba nazo noma ngixazulule izinkinga ezingase ziphakame. Ngingase ngibingelele izivakashi zami mathupha noma zingangena zisebenzisa ibhokisi lokukhiya.